Home / စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်စွာရပ်တည်ဖို့ MBA ကိုဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ အပေါ်က စာသားလေးကို
အောင်မြင်မှု ဆိုတာ အိပ်မက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလို ဆွတ်ခူးရယူနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အောင်မြင်သူတိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ လူတွေ မသိကြတဲ့ ပေးဆပ်မှု၊ အရည်အချင်းနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ များစွာ ရှိနေစမြဲပါ။
အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်မယ်လို့ အိပ်မက်ရှိသူတစ်ယောက်ဆိုရင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာတွေ့ လက်တွေ့ စေ့စပ်ကျွမ်းကျင်ရမယ်၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် သဘောသဘာဝတွေကိုလည်း သိနားလည်ထားရမယ့်အပြင် အရည်အသွေးပြည့်ဝမှန်ကန်တဲ့ Education Level ပညာအရည်အချင်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ယနေ့ခေတ်မှာ ဒီလို လိုအပ်တဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ MBA ဘွဲ့ကို အလေးထား ရယူဖို့ ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ အအောင်မြင်ဆုံး စာရင်းထဲ အပါအဝင် ဖြစ်ကြတဲ့ Michael Bloomberg, Tim Cook, Doug McMillon တို့ဟာ MBA Degree Holder တွေပါ။
(စီးပွားရေး နယ်ပယ်မှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင် ကျော်ကြားကြသူတွေဖြစ်တဲ့ Sheryl Sandberg, George Bush, Shaquille O’Neal နဲ့ Ina Garten တို့ဟာလည်း MBA Degree Holder တွေဖြစ်ကြပါတယ်။)
ဆိုတော့ မေးစရာတစ်ခုက စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်ဖို့ MBA ဘွဲ့က မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်တစ်ခုလား?
Yes or No ကိုစာဖတ်သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ်။
အောက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကနေ အတွေးတစ်ခုကိုတော့ ရသွားစေမှာပါ။
သင်က MBA Degree Holder တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရင်
အတွေးအခေါ်ကို ပြောင်းလဲ လာစေနိုင်ပါတယ်။
MBA က လူတစ်ယောက်ရဲ့ Mindset ကို အလုံးစုံမပြောင်းလဲစေနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ လုပ်ငန်းသဘောသဘာ၀ အမြင်တွေကို တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ကိုယ်ကသာ Entrepreneur တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီလို MBA ကို လေ့လာထားခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘယ်လို Strategy တွေချမှတ်ပြီး အောင်မြင်မှု ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ရယူမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကို သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ ဘောင်အပြင်ဘက်က စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်လာမယ်။ အတွေးအခေါ် အိုင်ဒီယာ များစွာ ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
ခိုင်မာတဲ့ Business Plan နဲ့ Strategy တွေချမှတ်နိုင်တယ်။
လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်မှာ လက်တွေ့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေအနေနဲ့ Business ဆိုင်ရာ သီအိုရီတွေ ဗဟုသုတတွေ ထပ်မံ လေ့လာသင်ယူ လိုက်ရတဲ့အခါ ကိုယ့်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ Hard Skills & Soft Skills တွေကို ထပ်မံဖြည့်ဆည်းခွင့် ရသွားတယ်။ ဒီအခါမှာ ဘယ်လို Goal တွေချမှတ်ရမယ်၊ ဘယ် Target ပြည့်မှီဖို့တော့ ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ Planning & Strategy ပိုင်းမှာ အထူးတလည် ကျွမ်းကျင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က အပြည့်အဝ ကြိုးစားဖို့တော့ လိုအပ်တာပေါ့။ အောင်မြင်ဖို့အတွက် အနီးစပ်ဆုံး Business Plan တစ်ခုကို ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံး Support ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Leadership စွမ်းရည်ကို ကောင်းမွန်လာစေနိုင်တယ်။
Management Level ကို တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ရတော့မယ် လူတစ်ယောက်အတွက် အောင်မြင်မှုကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေထဲမှာ Leadership ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းကလည်း အဓိက ကျပါတယ်။ လူပေါင်းစုံကို စီမံ ဦးဆောင်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ Adaptability ကောင်းကောင်းနဲ့ Communicate လုပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း အပြည့်အဝနဲ့ ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုအတွက် MBA ဘွဲ့ကို လေ့လာသင်ကြားခြင်းက များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
Industry နယ်ပယ်မျိုးစုံကို ဘာသာရပ် အမျိုးအစားအလိုက် သင်ယူလေ့လာခဲ့ရသူတွေမို့ Business နယ်ပယ်က Organization တွေအကြောင်း အခြေခံကစလို့ Real-World-Business သဘောတရားတွေကို သိရှိလိုက်ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုအပေါ်မှာ Locally သာမက Globally အထိ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေ စဉ်းစားနိုင်မှု စွမ်းရည် မြင့်တက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
MBA ကိုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး နယ်ပယ် အမျိုးမျိုးက လာရောက် လေ့လာသူတွေ ပေါင်းစုကြတဲ့အခါ အတွေးအခေါ် အမြင်အသစ်၊ မိတ်ဆွေသစ်တွေ ရရှိလာမှာကတော့ မလွဲပါဘူး။ ဒီဘာသာရပ်အတွက် Case Study တစ်ခု (သို့) Business Nature တစ်ခုကို ကိုယ်က ဒီလိုအမြင်ရှိပေမယ့် သူက ကွဲပြားတဲ့ အတွေး ရှိရင် ရှိနေမှာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး အသိပညာ ဗဟုသုတများစွာ တိုးစေနိုင်မယ့် အပေါင်းအသင်းကောင်းများစွာ ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတစ်ခုပါ။
ဘာမဆို အစီအစဉ်တကျ လုပ်နိုင်စေတယ်။
ဆိုလိုတာက MBA သင်ကြားလေ့လာမှုတွေကတဆင့် Strategic Thinking ကောင်းလာနိုင်တာပါ။ ကိုယ်တတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာရပ်တွေကို လက်တွေ့အသုံးချတဲ့အခါမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်း ဖြစ်တဲ့ Planning ပိုင်းတွေ၊ Time Management တွေကစလို့ Self-Discipline တွေ Self-Confidence တွေရရှိလာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်အရာကိုမဆို တိတိကျကျနဲ့ စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်တတ်တဲ့ အရည်အချင်းကိုပါ ရလာစေနိုင်ပါတယ်။
မြင့်မားတဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရစေနိုင်တယ်။
ဒါကတော့ အထူးတလည် ရှင်းပြနေစရာတောင် မလိုပါဘူး။ မြင့်မားတဲ့ ပညာရေးနဲ့ အရည်အချင်းရှိသူတိုင်းအတွက် မြင့်မားတဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေက စောင့်ကြိုနေစမြဲပါ။ ဒါကြောင့်လည်း MBA Degree ဆိုတာ သင့် Career Development အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Promotion, Designation နဲ့ Earning တွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ အကောင်းဆုံးသော လှေကားထစ် တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ MBA တက်လိုက်တာနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ အရည်အချင်းတွေအားလုံး ပိုင်ဆိုင်သွားမယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီလို အရည်အချင်းရှိသူ အများစုက MBA Degree Holder တွေကြီးပါပဲ။ အဓိကတော့ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကသာ ကိုယ့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်မှာ အထက်ပါ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင် စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ သင့်အတွက် နေရာတစ်နေရာကတော့ မလွဲမသွေ ရှိနေမှာ သေချာပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်၊ ကိုယ့်အလုပ်အတွက်၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် Value တစ်ခုပေးနိုင်သူတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ အပေါ်ကမေးခွန်းရဲ့ Yes or No အဖြေကို စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်ပဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ။
" အောင်မြင်မှုဆီ လျှောက်လှမ်းချင်သူတိုင်းအတွက်
MMC မှာအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေက အသင့်စောင့်ကြိုနေပါတယ်။"